Elizabeta (renin'i Joany) : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Elizabeta (renin'i Joany) : Fahasamihafan'ny versiona roa
Elizabeta (renin'i Joany) (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Oktobra 2019 à 11:42
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Oktobra 2019 à 11:38 (hanova)
(Olona resahina ao amin'ny Baiboly)
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Oktobra 2019 à 11:42 (hanova) (esory)
[[Sary:Champaigne visitation.jpg|vignette|362x362px|Famangian'i Maria an'i Elizabeta]]
I '''Elizabeta''' dia renin'i [[Joany mpanao batisa]] sady vadin'i [[Zakaria (rain'i Joany)|Zakaria]]. I Elizabeta dia resahina ao amin'ny [[Baiboly]] ao amin'ny [[Evanjelin'i Lioka]] ao amin'ny toko voalohany. Vehivavy efa be taona izy, zanaky ny mpiray tampo izy sy i Maria, vadin'i Zakaria. Amin'ny [[teny hebreo]] dia atao hoe אֱלִישֶׁבַע / ''ʾĔlîšéḇaʿ'' na אֱלִישָׁבַע / ''ʾĔlîšāḇaʿ'' izay midika hoe "Nianiana ny Andriamanitro". Vakina hoe ''Elišévaʿ'' na ''Elišávaʿ'' io anarana io amin'ny teny hebreo ankehitriny. Amin'ny [[teny grika]] dia atao hoe Ἐλισάβετ / ''Elisabet'' izany. Amin'ny [[teny arabo]] dia atao hoe أليصابات / ''Alyassabat'' i Elizabeta.
Nanambara tamin'i Zakaria ny hiterahany zazalahy ny anjaly [[Gabriela (arikanjely)|Gabriela]]/Gabriely, izany zaza izany no ho tonga mpaminany aty aoriana, dia i Joany Batista (na Jaona mpanao batisa).
Rehefa novangian'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]], izay bevohoka an'i [[Jesoa]] koa, i Elizabeta (Lio. 1.39-56) dia niarahaba azy i Elizabeta ("Arahaba ry Maria ...") ary nanao hira fiderana an'Andriamanitra i Maria kanivavaka. Ankalazain'ny Katolika indrindra izany vavaka izany. Milaza ny Evanjely fa tsy mpisorona fotsiny ihany i Zakaria, fa i Elizabeta koa dia mbola taranak'i [[Arona|Aarona]] (Lio. 1.5). Araka izany dia tokony ho taranak'i Aarona koa i Maria. Nanjary moana i Zakaria taorian'ny fanambaràn'ny anjely ka i Elizabeta no nilaza ny anaran'i Joany (Lio. 1.60-64).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/975652"